Hadaad jeceshahay in lagu jeclaado, jacayl. - Seneca - xigasho Pedia
Hadaad jeceshahay in lagu jeclaado, jacayl. - Seneca
Jacaylku waa shayga ugu muhiimsan nolosheena, oo ay weheliso farxad. Labadan waxyaaloodba way isku xidhan yihiin. Haddii aadan qof jeclaan karin, farxad kama gaari kartid. Hadaad rabto inaad kasbato farxad, waa inaad fidisaa jaceylka inta ugu badan ee aad karto.
Waxaan ognahay in mararka qaar ay aad u adag tahay in qof la jeclaado xaalad dartiis. Si kastaba ha noqotee, haddii aad qof jeclaan karto, waxaa jira suurtagal in isaga ama iyadu ay bogsiin doonaan. Hagaag, waa inaad ogaataa in jacaylku uu yahay daaweynta ugu fiican adduunkan jacaylna dhinacaaga ah waxaad dadka ka dhigi kartaa mid faraxsan oo qanacsan.
Intaas waxaa sii dheer, waxaad heli doontaa farxad iyo raynrayn. Hagaag, waa mid ka mid ah waxyaabaha inteena badan ay rabto. Jacayl la’aan, nolosheena majirto. Marka, markasta oo aad fursad u hesho inaad qof jeclaatid, waa inaadan waligaa ka fogaan.
Hal shay oo ay tahay inaad maskaxda ku hayso waa haddii aad rabto inaad jacayl ka hesho qof, waa inaad sidoo kale jeclaataa iyaga. Adigoon siin jacayl, kama rajeyn kartid jacayl qof. Waa wax aan isweydaarsaneyno. Markaa waligaa ha joojin jacaylka qof.
Si kastaba ha noqotee, waxay noqon doontaa ikhtiyaarka kuugu fiican haddii aadan ka fileynin wax jacayl ah. Qofka oo jeclaada oo ujecel jacayl soo laabashadu maahan wax la sameeyo. Haddii ay dhacdo in qofku ku siiyo inuu jacayl kuu siiyo, qalbiguna wuu jabin doonaa. Laakiin ma aha inaad ka walwasho wax kastoo ay tahay qaanuunka nolosha haddii aad qof jacayl u qabtid qof ayaa kugu soo noqon doona.
Marka, waad arki kartaa in jaceylka uu yahay waxa ugu muhiimsan nolosheena. Waxay mas'uul ka tahay nabadeena, farxadda, iyo qanacsanaantayada. Si sax ah, jacaylku waa shay aad u baahan tahay. Waxay ku siin doontaa xusuusta aad ku keydin karto noloshaada oo dhan.
Xigashooyin qurux badan jacayl
Xigashooyin qoto dheer oo ku saabsan jacaylka
Xigasho jacayl caan ah
Xigashooyinka wanaagsan ee jacaylka
Xigashooyin jacayl dhiirigalin ah
Xigashooyin xiiso leh oo ku saabsan Jacaylka
Quotes Jacaylka iyo Xiriirka
Sawirada Jacaylka leh xigashooyinka iyo hadalada
Xigasho jacayl leh sawirro
Quotes Xiriirka Jacaylka
Fikradaha Jacaylka Jacaylka
Xigasho kusaabsan nolosha iyo jacaylka
Xigashooyin jacayl gaagaaban
Erayo Jacayl Gaaban
Xigashooyin Gaaban oo Ku Saabsan Jacaylka
Xigasho jacayl macaan
Xigashooyin jacayl run ah iyo hadalo
Xigasho Love Love
Quruxdu lama xaqiijin karo muran la'aan, ama ninku kaamil ma ahan tijaabooyin la'aan. - Lucius Annaeus Seneca
Jawharad laguma safeyn karo khilaaf la'aan. Waxaa muhiim ah in la fahmo in si